मरेकी छोरी जव काठमाण्डौको कोटेश्वरमा हिड्दै गर्दा भेटिएपछि……. – Etajakhabar
काठमाडौं । चैतको अन्तिमतिर डडेल्धुराबाट धनगढी हुँदै अमरगढी २ आइतेबजारकी निर्मला थापामगर परिवारलाई खबर नगरी काठमाडौं आउँछिन् । काठमाडौं आएर होटलमा काम सुरु गर्छिन् । सम्पर्कबिहीन भएपछि सीतालाई परिवारले खोज्न सुरु गर्छ । कतै नभेटिएपछि निर्मलाको परिवार काठमाडौं आउँछन् । काठमाडौं आएका निर्मलाको परिवारले प्रहरीमा उजुरी गर्छन् ।
निर्मलाको बाबुले ९८१३९०….नम्बरमा फोन गरेलगत्तै रिसिभ हुन्छ । संवादको क्रममा उत्तताबाट ‘म कल्पना खड्का’ हो भन्ने जवाफ आउँछ । अनि निर्मलाको बाबुले मेरो छोरी खोई त भनेर प्रश्न गर्छन । फोन संवादकै क्रममा म तपाईको छोरीको साथी हो । हामी बनेपामा ३/४ जना सँगै बस्छौं । एकदिन मर्निङवाक जाँदा छोरीलाई ट्याक्सीले ठक्कर दिएको कुरा बताउँछिन् ।
बाबुलाई देखाउँदा आफ्नै छोरी : सीताको परिवारलाई छोरीको दुर्घटनामा मृत्यु भयो भनेर बताउने ती युवती पक्राउ गरिसके पछि प्रहरीले निर्मलाको बाबुलाई परिसर बोलाउँछ । परिसर आएर बाबुले हेर्दा ती युवती आफ्नै छोरी हुन्छिन् । फोनमा उनले आवाज परिवर्तन गरेर बोल्ने गरेको डीएसपी बोगटीले बताए । निर्मला कोटेश्वमा कोठा भाडा लिई एक रेष्टुरेन्टमा काम गर्दै आएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । निर्मलाले आफ्नै परिवारलाई मरेको भनेर किन भनिन् भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । श्रोत रातो पाटि
Posted on: Saturday, July 13, 2019 Time: 19:07:45
बिहे गरेको श्रीमानले श्रीमतीसंग भने, तिम्री आमा र बहिनि पनि ल्याम र केटा बोलाइ पैसा कमाऔं !
यसकारण पिसाव गर्नुभन्दा अघि सुँघेर कुकुरले भित्ता र रुखमा पिसाव गर्छ !
आँबुखैरेनीमा एक बाबुले आफ्नो छोरीको विवाहमा अनौठो दाइजो
सानो विमान केवल कारमा अल्झिएर भयो दुर्घटना
आफ्नै कक्षामा पढ्ने साथीसँग ओछ्यानमा पल्टिएकी उनी , ब्यूँझिदा उनले नै गरे…